Tag: xoojinta tijaabada isbarbar -dhigga | Martech Zone
Tag: iibka xoojinta fulinta tijaabada isku midka ah
Tilmaamaha iyo Habdhaqanka Ugu Fiican ee Tijaabinta Isdhexgalka Iibka
Khamiis, Janaayo 19, 2017 Jimco, Janaayo 20, 2017 Amar Kukreja
Tijaabinta Salesforce ayaa kaa caawin doonta inaad ku ansaxiso isku-darka Salesforce-kaaga iyo sida aad ula shaqeyn karto barnaamijyada kale ee ganacsi. Imtixaan wanaagsan ayaa daboolaya dhammaan qaybaha 'Salesforce' laga soo bilaabo xisaabaadka illaa hoggaamiyeyaasha, fursadaha ilaa warbixinnada, iyo ololeyaasha illaa xiriirada. Sida kiisaska dhammaan imtixaannada, waxaa jira hab wanaagsan (wax ku ool ah oo hufan) oo lagu sameeyo tijaabinta 'Salesforce' iyo qaab xun. Marka, waa maxay tijaabinta Salesforce dhaqanka wanaagsan? Adeegso Qalabka Tijaabada Saxda ah - Tijaabada Iibka